Faucet an-dakozia Nickel Gooseneck
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Gooseneck Faucet ao an-dakozia Misintona
Fankarem-barotra WOWOW Gooseneck Faucet Amin'ny Pull Out Sprayer
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 41 mpanjifa naoty
Gooseneck kiraro fitsangatsanganana WOWOW miaraka amin'ny safidy marobe. Fitaovana avo lenta ho an'ny fampisehoana tsara indrindra. 5-garantiana XNUMX taona. Vidio ny kiraro plorika any pasika ho anay izao!
2311701 torolàlana fametrahana
Gooseneck Kitchen Faucet 2311701
Ny lakozia dia reharehanao ary mila ny fifangaroana tsara indrindra amin'ny famolavolana sy ny asany ianao. Amin'izao fotoana izao dia afaka misafidy drafitra maro ianao hampiasaina amin'ny lakozia nofinofinao. Mety ho sarotra aza ny hanao safidy eo amin'ny tànanao rehetra. Tsy ny fitaovan'ny lakozia rehetra ihany no tonga amin'ny karazana endrika sy habe rehetra, fa tsy tokony hohamaivaninao koa ny fiantraikany amin'ny safidy isan-karazany amin'ny faucets an-dakozia. Tako-dakozia dia teboka voajanahary ao amin'ny lakozia rehetra. Ho fanampin'izany, ny faucets an-dakozia dia iray amin'ireo fitaovana ampiasain'ny olona any an-dakozia. Rehefa mampiasa faucout an-dakozia ianao hanomanana ny sakafonao, manasa vilia, ary manasa ny tananao, imbetsaka isan'andro isan'andro no ampiasanao an'io zavatra an-dakozia io. Noho izany dia tsara kokoa ny mandany fotoana bebe kokoa hisafidianana gripo amin'ny lakana milamina indrindra ho anao.
Ny faucet ao an-dakozia dia misy fomba sy fomba fiasa samy hafa mba hanolorana sakany maro hifanaraka amin'ny karazana fitakiana rehetra. Ankoatr'izay, ny faucet ao an-dakozia dia misy loko, habe ary karazany maro karazana. Ny karazan-faucet an-dakozia lehibe dia ny faucet an-dakozia misintona, ny fantsom-pako an-dakozia, ary ny faucet an-dakozia avo lenta. Ireto faucet an-dakozia avo lenta ireto dia antsoina ihany koa faucet an-dakozia gooseneck. Ny tombony lehibe amin'ny faucet lakozia gooseneck dia ny manome sehatr'asa bebe kokoa amin'ny lakozia rehetra. Ny faucet an-dakozia gooseho lava kokoa dia manome anao fidirana tsara mankamin'ny fatana lakozia. Amin'izany fomba izany dia tsy hanana olana ianao amin'ny fametrahana zavatra lehibe, toy ny vilany na vilany goavambe, ao anaty fitoeram-bokinao, ary eo ambanin'ny faucet dakozia gooseneck avo lenta.
Voatosika vita amin'ny grosika vita amin'ny plozika gooseneck
Ireo mpamorona ny WOWOW dia nanokana ny fiezahany rehetra hanolotra anao faucet lakozia gooseneck kanto izay manolotra fampiasa tsara indrindra ihany koa. Noho ny endriny marevaka, ny faucet an-dakozia an'i WOWOW dia manampy anao hamita tsara ny lakozanao. Ity faucet ao an-dakozia avo lenta ity dia tena hanome fisondrotana ny famolavolana lakozia. Ambonin'ny zava-drehetra, dia misy fampiasa tsara koa miaraka amin'ny sprayer-na spray-integrated.
Ity baobom-baravarankely natsipitsahana nosy ity, izay fantatra ihany koa amin'ny vorom-bolo any an-tsofina swan-neck, dia manome endrika indostrialy miaraka amin'ireo singa mandrafitra sy tsy misy farany. Ny faucope an-dakozia WOWOW dia tsy ho an'ny toerana ao amin'ny magazine misy mpanaingo izay misy lakozia famolavolana manokana. Tsisy dikany, ity gropy kisendrasendra gooseneck ity dia iray amin'ireo goavam-baravarana any an-dakozia WOWOW sy ny reharehan'ny mpamatsy grct eran-tany.
Faucet an-dakozia goavambe
Ankoatra ny famolavolana, io gropy boogle gooseneck amin'ny WOWOW io dia faucet maro samihafa miasa izay manolotra safidy roa manaparitaka. Tsy vitan'ny hoe ity plastika amin'ny lakozia avo ity dia manolotra renirano mahazatra mba hamenoana vilany sy panaka ohatra. Ankoatr'izay, dia manana fomba fihenan-tsakafo mampihetsi-po tsara izy ireo hanamontsana ny lovia sy ny kitapo an-dakozia mba hanolorana fomba fanadiovana mahafinaritra. Afaka mifamadika mora eo anelanelan'ny safidy roa miaraka amin'ny bokotra eo amin'ny gropy gripo. Izany dia ahafahana mamadika safidy amin'ny tanana tokana raha mbola mandroso ianao. Ny fanovana asa dia tsy hiteraka fahatapahan-javatra sy ny fahatsorana ahafahanao manodina ny bokotra hahagaga anao!
Ity gropy amin'ny lakandrano gooseneck ity dia misy hosoka 60 sony izay manome hanamorana mora, noho ny silic gel gel na gripo. Amin'ity hosotra ity, azonao mora ny mamonjy ny toerana sarotra rehetra manodidina ny fandroana an-dakozia. Ary ambonin'izany rehetra izany, ny adaptatera swivel anjakan'ny avotra dia ahafahanao mihetsika mora manome fampiononana farany. Ny fomba maototra mora vita amin'ny gropy any amin'ny fivahiniana gooseneck dia hitarika ny zipo faucet hiverina any amin'ny toetrany tany am-piasana rehefa vita ny fanadiovana. Tsy misy olana!
Goiskeck faucet an-dakozia manana kalitao tsara
Ny fantsona gooseneck lakozia dia manome anao kalitao ary tsikaritrao fa amin'ny lafiny rehetra amin'ity faucet dakozia avo lenta ity. Milanja 70 Oz mahery ny paompy gooseneck ao an-dakozia, noho izany dia hitanao avy hatrany fa manana vokatra vy mafy ianao. Ny faucet gooseneck vita amin'ny varahina WOWOW dia manana famaranana nikela tena tsara, ary ny fefy rehetra dia voahidy mafy amin'ny fitaovana avo lenta. Manolotra anao io traikefa fantsona tsy misy rano mitete sy tsy misy rano mitete io. Ankoatra ny kalitao, ity faucet lakozia gooseneck an'ny WOWOW ity dia mora apetraka ihany koa. Ny faucet ao an-dakozia WOWOW dia mila fanamboarana lakozia 1, 2 na 3 fotsiny ary, fantsom-drano mangatsiaka sy mafana. Ny escutcheon metaly tafiditra ho an'ny fanamboarana lakozia 1, 2 na 3-lavaka, dia mahatonga ity faucet lakozia gooseneck ity hifanaraka amin'ny karazana fanamboarana lakozia. Izy io dia mifanentana amin'ny karazana sidina isan-karazany ary tsy mila miady mafy amin'ny fanonerana ny banga na lavaka ratsy ianao. WOWOW dia manome anao singa feno fametrahana.
Novidiana gropy gropy mandeha amin'ny alàlan'ny vidiny
Raha ny kalitaon'ny gropy gooseneck WOWOW dia tsy azo iadian-kevitra, ny taham-pahavam-bidy amin'ny vidin'ny grc amin'ny lakozia avo any an-tsena no tsara indrindra ho hitanao amin'ny tsena. Satria ny teknikan'ny famokarana maoderina dia mampiasa teknika famokarana maoderina miaraka amin'ireo dingana vita amin'ny automatique, azontsika atao ny manolotra io gropy kusotra gooseneck amin'ny vidiny tena lafo io. Ny faucine an-dakozia matetika no singa farany izay amidy amin'ny lakozia vaovao novolavolaina. Noho izany ny faucets an-dakozia matetika dia ny fidirana famaranana ny teti-bolan'ny ankapobeny, izay toerana anaovan'ny tetibola matetika na efa tratrarina. Noho izany dia tsara ny mahafantatra fa mbola afaka mahazo faucet an-dakozia avo lenta amin'ny teti-bola voafetra ianao.
Ny kirihitra gooseneck ao anaty lakozia dia alefa aminao maimaim-poana, ka tsy hiatrika fandaniana fanampiny ianao. Ny hitanao dia izay azonao, ary mihatra amin'ny vidin-tsika ihany koa. Amin'ny WOWOW dia miahy ny mpanjifanay izahay ary maniry ny hanolotra anao ny fahafaha-manana famolavolana lakozia ambony amin'ny vidiny ambany indrindra.
Paiso any an-dakozia gooseneck izay itokisanay!
WOWOW mino ny vokariny ary noho izany tsy matahotra izahay manolotra anao ny vanim-potoana fiantohana 5 taona. Ankoatr'izay dia manolotra anao ny avo indrindra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay. Vonona hanohana anao foana izahay, na dia mametraka fantsom-pako any an-dakozia gooseneck aza. Tsy noho ny antony tsy ahazoana toky anao fa ny politikanay miverina mandritra ny 90 andro. Raha tsy tianao ilay vokatra na inona na inona antony dia hampodianay vola ianao nefa tsy misy fanontaniana. Araka ny hitanao, amin'ny WOWOW dia matoky ny vokatray izahay!
Ny tombony azo avy amin'ny gropy kusotra gooseneck amin'ny fomba fohy:
· Famolavolana manaitra mampiavaka
· Fampandrihana mitambatra mitambatra
· Fampandehanana roa
· Manambatra fomba amam-bika avo lenta
SKU: 2311701 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Misintona midina, price
Stainless vy / firaka zinc / varahina
Kitchen / Indoor / Commercial / Restaurant
Faucet milentika ao an-dakozia; Hosana rano mafana sy mangatsiaka 50cm; Sintomy ny sprayer; Takelaka takelaka; Fitaovana mitaingina
Ny hatsarako dia vita tsara ary endrika tsara toy izany, tena matanjaka ary ny tsindry rano dia tsara kokoa noho ilay Delta taloha nosoloiny, somary nitandrina ny fividianana marika, fa ity sombin-javatra ity dia tsara lavitra kokoa ary miavaka ny kalitao, I Hividy ny faucet-ko avy amin'izy ireo aho amin'ny ho avy, manana faucet fandroana 2 araka izay itiavako an'ity lakozia ity tokoa, tena hanoro hevitra an'izay mitady hanolo ireo entana taloha amin'ireto, tena mendrika ny vola.
Na dia nalahelo aho nanao veloma ny faucet MC tany am-boalohany, hatsaran-tarehy ity azo antoka ity! Tiako ny manome fonon-tànana manokana hapetraka aza izy ireo mba tsy hanakorontana ny chrome
Amin'ny teti-bola, mendrika izany ny vola! Mora be ny nametraka azy (olana hafa iray manontolo ny famoahana ilay taloha). Horesahiko amin'ny alàlan'ny lanjany mavesatra sy mifamatotra tsara amin'ny faran'ny fantsona ao ambanin'ilay filentehana ireo fantsom-by.
- Fanerena rano tena tsara
- Fandidiana malefaka amin'ny fantsona sy fantsona
- Mihemotra moramora ny fantsona ary miverina manangana toerana
- Ny fotony nanarona tanteraka ny lavaka tany am-boalohany ho an'ny knobs rano mafana / mangatsiaka
- Fandefasana tsifotra 3 samihafa amin'ny fantsom-bokotra miaraka amin'ny bokotra fijanonana haingana
- Mahavita mampiditra vilany fihinanam-bilona ao ambaniny mora foana na afaka mamela azy eo ambony latabatra ary mampiasa ny fantsona hamenoana azy.
- Mbola tsy nahita iray.
Mendrika ny vola raha mitady faucet tsara tarehy ianao amin'ny famakiana ny banky. Ampirisiho fatratra ity iray ity!
NAMetraka ity faucet ity fotsiny tao amin'ny tranonay aorian'ny sekoly. SIMPLE no teny! Fitaovana 2 sy lamba famaohana ihany no ilaina. Nametraka faucet namboarina toy izany koa aho ary ity dia toa mahafinaritra sy mahafinaritra. Matanjaka tsara ary tsy misy famoahana
Tsy maintsy zatra ny bokotra mikoriana ny rano isika mba hahitana ny tahon'ny pullout ao ambadiky ny tanany (manatrika ny faucet fa tsy ny manatrika antsika). Azoko izany, ampiasao ny rantsan-tànanao fa tsy ny ankihibenanao hanova ny renirano mankany amin'ny famafazana. Ho hitantsika eo raha ny olon-kafa rehetra ao amin'ilay trano dia hanao izay hahazoana antoka fa averina ao an-tendany ny tahony fa tsy avela hilona izy.
Nahamarika zavatra kely tsy mendrika kintana aho… Ny bokotra kely manga sy mena eo amin'ny tahony dia mihemotra. (Jereo ny sary voalohany etsy ambany. Faucet amin'ny ankavia no faucet voalohany. Ny faucet eo ankavanana dia ilay faucet vaovao) Matetika ny mena dia eo ankavanana ary ny manga kosa eo an-kavia ho an'ny rano mafana - mangatsiaka. Niezaka nanodina ny bokotra aho fa hitako fa tsy nihetsika ilay izy. Tsy misy olana, nataoko azo antoka fa nifanaraka tamin'ny bokotra ny fantson-drano ary hampahafantariko ny mpiasako.
*** O N2020-05-10
Ireo no fiheverako rehefa avy nametraka sy nampiasa an'io nandritra ny iray andro.
Namoaka an'io avy tao anaty boaty io dia nahatsapa ho mafy orina, ary tsara tarehy. Nofonosina tsara izy io, ary tsy nisy fatiantoka ny fandefasana azy.
Afaka nametraka an'ity mora foana ity niaraka tamin'ny pilara roa aho, ary mpamily visy Philips. Ny torolàlana dia mazava tsara, ary tsy nanana olana tamin'ny fametrahana marina aho. Ny olana mety hitranga dia ny tsy ampy taona miaraka amin'ny torolàlana. Mampiseho ireo torolàlana fa tokony apetrakao ao anaty lavaka mihombo ao anaty fitoeram-baravarana ilay faucet (raha tsy izany dia ampidirina ao anaty lavarangana ilay lavarangana 3), avy eo avy eo ambaniny dia apetaho ilay mpanasa plastika, ilay mpanasa vy ary ireo voa lehibe Ny tsy asehony dia misy peratra O izay mila mandeha eo amin'ilay vatan'ny faucet ALOHA ampidirina amin'ny lavaka fametahana na ny bezel. Tsy dia sarotra ny namantatra azy io, fa mety hahasadaikatra kely ihany.
Tamin'izany rehetra izany dia afaka nanala ilay faucet taloha aho ary nametraka ilay vaovao tao anatin'ny adiny iray latsaka.
Faly be aho amin'ny fomba fiasan'ity faucet ity. Mahatsiaro ho malama sy mafy orina ny tahony ary tsy nanana olana tamin'ny fanitsiana azy tamin'ny mari-pana sy ny tahan'ny fivelomana aho. Ny bokotra select select dia mandeha tsara. Mahery vaika ny toerana fanefitra, izay tsara amin'ny fanadiovana. Mahatsiaro ho matanjaka ilay faucet ary mandeha tsara ilay nozazy nidina ary miverina tsy misy olana. Ity faucet ity dia toa tsara ihany koa ary mifanentana amin'ilay tototry ny tavoahangy borosy natsangako azy tsara.
Fitarainana kely dia kely:
Ny fanitsiana ny maripana rehefa mandeha ny rano dia somary somary somary somary somary somary somary somary somary saro-kenatra ihany. Tsy sarotra izany, saingy tsy mety izany.
Amin'ny fiparitahan'ny famafazana, miaraka amina rano mihodina hatrany dia mety ho mahery kely loatra izy io, ary zavona / famafazana maivamaivana dia ho afa-mandositra ilay rano.
Ny bokotra hisafidianana ny maody famafazana dia misy fikitika kely tokoa. Tiako kokoa raha naka tsindry kely fotsiny hanovana ilay maody.
Heveriko fa ity dia faucet tena tsara, ary toa ampitahaina amin'ny hafa izay lafo efatra heny. Mendrika ny vidiny ary mendrika ny naoty kintana dimy.
Wow vokatra tena tsara amin'ny vidiny. Raha ampitahaina amin'ny faucet mitovy amin'i Lowe sy ny azy ireo dia avo roa heny ary avo telo heny ny vidiny. Mora ny mametraka miaraka amin'ny zavatra ilaina rehetra. Hanoro hevitra ity marika ity aho.
Misaotra anao vady faly be!
C *** h2020-05-18
TIAKO ity faucet ity. Avy amin'ny valan-jiro vy nopetahany enamel niaraka tamin'ny faucet nikela izay tany am-piandohan'ny tranonay tamin'ny 1950 izahay ary nosoloinay izany. Iriko iray ihany no tadiaviko izay sprayer ihany koa. Toa tsara izany eo am-panamboarana ny lakozia mbola mandeha ary mahomby izany! Izahay dia tsy manana tsindry rano lehibe, saingy mbola manana hery lehibe ihany io, indrindra rehefa eo am-pamonoana ianao fa tsy amin'ny riandrano. Nametraka azy tsy misy olana ny vadiko ary mbola tsy nanao an'io mihitsy izy.
Ilay faucet an-dakozia taloha dia namoaka rano, nanandrana nametraka epoxy voalohany nanodidina ilay faritra nivoahana, tsy afaka namaha ny olana, nanapa-kevitra ny hividy faucet vaovao hisolo ny faucet tafaporitsaka.
Ny trano dia trano fanofana, tsy afaka manamarina ny fandaniana $ 200 hahazoana delta / moen, karohina amin'ny wowow, farany nanapa-kevitra ny haka ity fototra iray ity amin'ny hevitra sy ny vidiny.
Naka ahy adiny iray teo hanesorana ny faucet taloha ary hametrahana ilay vaovao. Ny faucet dia toa vita tsara, mazava ny torolalana. Rehefa avy nametraka azy dia namono / namono ny faucet, niasa araka ny nantenaina, tsy misy famoahana. Antenaina fa ity faucet ity dia hijanona elaela toy izao. Tena faly momba ny fividianana.
Rehefa nividy trano 80 taona aho dia fantatro fa mila manolo zavatra vitsivitsy aho, indrindra ny faucet ao an-dakozia taloha.
Ny fantsona tany am-boalohany dia napetraka tsy nety, ka diso ireo mari-pamantarana rano mangatsiaka / mafana. Nisy tsindry rano mahatsiravina koa io ary tsy niasa intsony ilay sprayer. Herinandro vitsivitsy taorian'ny nidirako dia nanapa-kevitra aho fa ny fanoloana faucet no ho tetikako manaraka.
Nividy ity faucet vaovao ity aho rehefa avy nijery ny hafa tany amin'ny magazay fanatsarana trano sy ny famakiana ny hevitro. Azo antoka fa tsy nandiso fanantenana ity iray ity.
Raha vantany vao nesorina ilay faucet taloha dia tsio-drivotra ary nametraka antsasak'adiny latsaka. Avy eo natodiko niverina ny rano mba hizaha toetra azy ary tezitra tamin'ny tenako aho fa tsy nividy izany haingana. Tsy ny fihenan'ny rano ihany no niverina tamin'ny laoniny, ny mari-pamantarana mafana sy mangatsiaka dia nasiana marika farany tsara ary naverina tamin'ny laoniny tanteraka ny fiasan'ny sprayer.
Amin'ny ankapobeny, tena faly amin'ny fividianako aho - ity no iray amin'ireo "fanavaozana" tiako indrindra nataoko tany an-tranoko!
A *** f2020-06-02
Nisolo tokan-tena tokana sy lava tokana tamin'ity iray ity. Ny zava-drehetra dia nifanentana tanteraka ary gaga tamim-pifaliana fa tonga niaraka tamin'ny fantsom-bolo mafana sy mangatsiaka voafatotra hatramin'ny fifandraisan'ny valizy mahazatra. Ny fantsom-panafody dia mampifandray haingana ary avy hatrany dia miaraka. Tsy nisy fivoahan'ny aotra voalohany nataoko. Fitaovana ilaina: mpamily visy sy alika kely hanamafisana ny voanjo amin'ny fantsom-panafody toy ny plester na ny crescent wrench. Fametrahana mora be. Raha plumber aho dia hividy am-polony vitsivitsy amin'ireo ary hitazona azy ireo ao anaty kamio. Mandoa $ 150 ny mpanjifa amin'izany ary ho faly.
Talanjona aho tamin'ny fahitana fa feno fonosana tsara ny faucet ary tsara ny endriny. Toy ny zavamaneno tsara io rehefa nanokatra ilay boaty ianao ary nahita azy voalohany. Napetrakay tao anaty faucets misy ny karazan-tahiry antitra 2 ity iray ity izay sarotra kokoa noho ny ambany noho ny toerana ety hahazoana mpiambina ambany - tsy maintsy nihazakazaka nankany amin'ny fivarotana fitaovana mba hahazoana zavatra hafa izay tsy nahavoa ny sisin'ny ny koveta. Azoko atao ny manoro hevitra ny orinasa mba hampiditra spin on retainer na hanao izay misy azo ampitahaina amin'ireo izay ampiasaina amin'ny faucets karazana loaka 2. Tianay ny manasa ny alika ary ny faucet hafa rehetra miaraka amin'ny sprayer izay mety amin'ity karazana ity dia natao mora foana ka noheverinay fa hanandrana an'io. Napetraka omaly tao amin'ny iray amin'ireo lavaka io (izay mifanentana tsara amin'ireo tariby mandalo azy ary hahazo plug ho an'ny lavaka sisa tavela isika na hametraka ao anaty dispenseran'ny savony). Ny fotoana dia hiteny rehefa ampiasaina ny fihazonana azy fa tena faly amin'ny vokatra izahay!
A *** f2020-06-13
Tiako ny zava-drehetra momba ity faucet ity. Tsy dia lafo loatra fa mendrika ny vola azo antoka! Ny fantsom-bolo mihitsy dia milamina mandray sy mivoaka ary lava be ihany koa. Mahafinaritra tokoa ny manasa lovia sy manasa anao hilentika rehefa avy eo!
Mila manova faucet an-dakozia taloha aho, liana tamin'ny famolavolana ity faucet ity, WOWOW tsy dia malaza loatra, saingy tsara ny vidiny, ka nividy tsy nisalasala aho. Nanaraka ny torolàlana hametrahana azy ny vadiko, ary afaka mamita tsy misy fanampiana hafa aza izy! Mety tsara, ny fikorianana, ny tahony, ny famafazana ny spray, tsara daholo! Fifanarahana tena mahafa-po!
Ireo karazan'efitra iray ihany dia amidy 3 heny amin'ny vidin'ny trano fivarotana an-trano. Reraka aho noho izany, saingy faly tamin'ity fividianana ity aho. Tonga lafatra ny tsindry rano ary mandeha tsara sy miverina tonga lafatra ny mpanotra pullout. Tsy mino ny kalitaon'ny vidiny aho !!!
Fanavaozana: Rehefa avy nampiasa izany nandritra ny volana maro aho dia mila milaza fa tena faly amin'ity vokatra ity aho. Mahatsiaro ho matanjaka sy manana kalitao izy ary mandeha tsy misy kilema. Nanana ahiahy aho satria nisy ny famerenana vitsivitsy izay nanohitra ny sasany momba ny fomba nialan'ny lohan-tsifotra (na tsy) nisintona azy ary nitazona ny toerako saingy tsy nanana olana aho fa ny lanjany dia miasa tsara amin'ny famerenana azy io ary mifanentana amin'izay tokony ho. Ity dia faucet tsara toy ny efa hitako izay nitentina avo roa heny noho ny maro hafa.
Toa mahatalanjona, miasa tanteraka ary dimy minitra hametrahana azy. Fitaovana tena kanto, tsara tarehy, tsara kalitao.
Ny fanamarihana hafa dia manamarika fa ny marika mafana sy mangatsiaka amin'ny faucet dia mametraka ny mafana eo amin'ny ilany ankavanan'ny fihodinana fanaraha-maso, ka ny ankamaroan'ny faucet amerikana dia mametraka ny mafana amin'ny ankavia. Tena tsy zava-dehibe izany, mazava tsara ny marika ary naharitra dimy ambin'ny folo minitra vao zatra. Na izany aza, raha apetrakao amin'ny sisiny ankavanana ny fantsom-panafody toy ny ataon'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny mafana dia ny lamosina ary mangatsiaka eo aloha izay safidy tsara. Saingy raha tena zava-dehibe dia azonao atao ny mamadika ny tsipika misy ny tsipika (na dia diso aza ilay mari-pamantarana fakan-doko kely. Tiako ho marina ny tondro raha sanatria tsy mahita ny fomba fiasa ny vahiny…)
Ny hany tena fanoherana ahy dia ny fijanonan'ny vidin-javatra ary nandoa bebe kokoa aho, nefa, ny vola tafiditra dia kely dia kely amin'ity karazana faucet ity… lafo be tamin'ny vidiny nandoavako izany ary mety ho fifanarahana tsara kokoa ho anao io .
E *** h2020-07-01
Io faucet io dia nanova ny fitoeran-drano, toa tsara izy io, mora be ny manadio, tena tsy misy dian-tànana, mandeha tsara izy io, atoro tanteraka!
Nanana an'ity aho nandritra ny roa volana izao ary mila milaza aho fa nihoatra ny andrasako ny vidiny aloa. Toa tsara izany ary mandeha tsara. Faly amin'ny fividianako!
*** E E2020-07-13
Tena mora ny mametraka. Tsy ilaina ny milentika milentika, fa fitaovana kely azo ovaina fotsiny ary visy mpanodina loha Phillips (lava kokoa ny mora) ary manao fantsom-pifandraisana ihany koa amin'ny fantsom-pifandraisana. Naka ny 20 minitra rehetra hametrahana raha vantany vao tafavoaka ilay taloha. Fividianana tsara izany ary tsara tarehy toa!
Nividy ity faucet ity ho kely lavitra noho ny faucet iray hafa dia ho eny amin'ny magazay boaty lehibe. Ilay gripo taloha dia nanjary maloto ary sarotra ny mameno rano anaty vilany. Mora ny fametrahana ary tsy nandany fotoana firy. Hanoro hevitra an'ity faucet ity ho an'izay mikasa hividy azy aho.
Ity dia asan'ny zavakanto ho an'ny mpanjifa mifantina. Tsy ho diso fanantenana ianao amin'ity fividianana ity. Novakiako aloha ireo famerenana ireo. Ny horonan-tsary miaraka amin'ilay vehivavy misintona azy nefa tsy apetraka akory dia mampihomehy tahaka ilay azoko. Ilay olona talohako dia nametraka ny latabatra fanaovana latabatra teo amin'ny tsipika famatsiana aloha fa tsy nandritra ny filentehany ary azoko toy izao. Tsy maintsy nesoriko izy io. Indraindray ny olona sasany tsy manana fahaiza-misaina. Napetraka tao anatin'ny 15 minitra. Mihemotra izy araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny lanjany mifatotra tsara amin'ilay marika mena manao hoe "lanja" ary tsy manenjana azy amin'ny fomba rehetra ianao raha tsy izany dia esorinao. Natao ho an'ny olona toy ny zavatra tsara ao an-dakozian'izy ireo, indrindra ny tsy fangarony ary mamafa azy ireo aorian'ny faran'ny fampiasana tsirairay. Tian'izy ireo ny mitazona ny famitana fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Ho anao ity. Ankafizo.
Faucet mahafinaritra ity hatreto. Miovaova ny fantsona ary toa voaorina tsara. Mora ny nametraka ny faucet ary toa tsara amin'ny famolavolana gisa. Nividy an'ity izahay hanoloana ny taloha iray izay tapaka ary tsy diso fanantenana mihitsy izahay. Manantena haharitra taona maro. Faly izy fa tonga amin'ny volafotsy borosy izay mifanentana amin'ny fitaovana hafa rehetra ananantsika.
A *** t2020-07-31
Mahafinaritra ity faucet ity! Ny vadiko dia tsy nanana olana tamin'ny fametrahana azy. Vokatra lehibe inona ho an'ny vola. Toa lafo be noho izy ny vidiny. Manoro hevitra mafy aho!
Tiavo ity faucet ity. Ny hany endri-paniriana tadiaviko dia ny famonoana ny sprayer rehefa maty ny faucet. Mila manova azy amin'ny tanana ianao mba hiverenanao amin'ny renirano mahazatra raha tsy izany dia hijanona ao anaty sprayer izy io
Tena mora ny mametraka plus kalitao tsara koa. Naharitra 12 minitra katroka ny famoahana ilay faucet teo aloha ary apetaho ity iray ity. Metaly mavesatra ity faucet ity. Nandeha tamina magazay fivarotana kojakoja lehibe aho ary nampitaha. Ity dia mampitaha tsara an'ireo izay mitaky intelo na inefatra mihoatra. Izaho dia lavitra ny manam-pahaizana ary na izany aza tsy nametraka olana aho. Mirary anao ho tsara vintana.
Nandidy an'ity tamim-pitaintainanana kely aho satria ny vidiny dia ambany lavitra noho ny vokatra hafa azo ampitahaina, saingy mifototra amin'ny fanamarihana noheveriko fa mendrika ny ahiana. Roa volana mahery aho izao no nanana an'io ary tena tiako izany! Matanjaka izy io, mora ny fitetezana ny bokotra ary tiako ny fiasa “miato” hamenoana siny, sns. Ny hany tsy dia tsara hitako dia tsy dia malefaka toy ny faucet farany nataoko ny fantsana; tsy midika akory izany hoe henjana izy io, fa tsy afaka aforinao ho “u” na zavatra hafa izany. Hanoro hevitra ity zavatra ity aho, miorina amin'ny zavatra niainako hatrizay!
Nametraka an'io ny tenako volana vitsivitsy lasa izay, ary hatreto, tsy mbola nisy fivoahana, faritra tsy misy harafesina na karazana fahasimbana hafa. Izy io dia karazana maivana ary toa somary marefo rehefa miasa ny tahony, saingy tsy nanana olana tamin'izany izahay. Faucet mora vidy kokoa izy ity, noho izany dia heveriko fa ny kalitao ambany dia ambany noho ireo marika izay an-jatony dolara, saingy ity dia safidy tsara kalitao tsara sy mendrika ho antsika. Tsy maintsy nividy baseplate izahay mba hiaraka aminy, izay toa tokony hampidirina, saingy tsy olana lehibe ho anay izany. Mividy tsara.
Herinandro no nampiasako an'io. Nanolo faucet Moen $ 200.00 izay vao 2 taona monja ary manana olana maro. Ity dia mora kokoa ny nametraka. Tsara toa an'i Moen ihany. Ny hany zavatra tsy tiako nefa azoko zatra dia ny lohan'ny faucet dia misy lohany ao anatiny ka rehefa miverina miverina amin'ny ampahany lehibe amin'ny faucet izy dia tokony ho toradroa izay indraindray tsy ary avy eo mipoitra kely. Mora ny manamboatra azy amin'ny famolahana azy kely. Hitako ny antony nanaovan'izy ireo an'io, ka rehefa eo amin'ny toerany ny togole eo anelanelan'ny karazan-drano dia mankany aoriana izay tsy tazana. Mividy tsara!
*** E E2020-08-17
Izaho dia nitady ny hisolo ny faucet ao an-dakozianay satria ilay taloha dia 20 taona mahery. Nandeha niantsena fivarotana fampitahana tao amin'ny magazay lehibe roa tamin'ny fivarotana fanamboarana boaty tao an-trano aho izay nahitako ny faucet "friendly budget" dia manodidina ny $ 90 miaraka amin'ireo fiasa tadiaviko. Nanapa-kevitra ny hijery izay varotra hitako amin'ny Internet aho.
Mahafinaritra ity faucet ity, ary tsotra be ny mametraka azy. Tena nandany fotoana bebe kokoa tamin'ny fanesorana ilay faucet taloha aho noho ny fametrahana ilay vaovao. Ny lava-pamatsian-drano dia ampy lava, olana aotra teo aloha. Raha ny momba ny fitaovana ampidirina, ny hany filàko dia ny screwdriver Phillips sy ny wrench open-end 5/8 ″. Mikasika ireo fitaovana ilaina amin'ny fanesorana ilay faucet taloha, dia tsy maintsy nongotako ny kodiarako notapahana noho ny vozon'akanjo tao ambanin'ilay fantsom-baravarankely.
Ny fitoviana sy famaranana ity faucet ity dia mitovy tanteraka amin'ny zavatra hitako any amin'ireo fivarotana eo an-toerana. Toa avo lenta ny fitaovana, ary tsara ny fiasa. Ho an'ireo izay mety manana olana amin'ny tsy fodian'ny lohany rehefa avy namoaka azy dia misy vahaolana tsotra. Afindrao ny lanjan'ny fiverenana miakatra amin'ny hosotra roa santimetatra mba tsy hanelingelina ireo fantsona hafa. Ny lanjany dia mavesatra loatra mba hitazomana ny lohan'ilay sprayer tsy misy andriamby ary mahomby tsara. Tsy hisalasala mividy fantsona WOWOW hafa aho na manoro izany amin'ny namana na mpifanaraka.
L M ***2020-08-21
Nividy ity faucet ity aho satria na ny vadiko na ny zanako vavy namaky ilay mora vidy tao an-tranoko rehefa nividy azy aho, dia tsy hanaiky izany ny iray amin'izy ireo. Mavesatra ny labozia, metaly rehetra ary mora apetraka. Tsy azoko antoka fa hisy handrava izany tsy ho ela. Tsy maintsy nividy fantsona sy adaptatera vitsivitsy aho mba hahatratra sy hifandray amin'ny fantson-drano fa mety tsara!
Avelao aho hanomboka amin'ny filazàna fa ity no faucet an-dakozia mora indrindra napetraka hatramin'izay. Efa nanao fametahana faucet nandritra ny taona maro aho ary mpantsaka plumber. Ny faucet dia miaraka amin'ny zavatra ilaina rehetra amin'ny fametrahana mahazatra ary miaraka amin'ny fantson-drano lava be. Tonga soa ho ahy ireo satria ny valizy famatsian-drano mafana dia napetraka ambany dia ambany ary tsy azoko antoka raha hahatratra izany? fa rehefa avy nitazona ny faucet tao anaty fitoeram-baravarana aho dia afaka nampifandray ilay fantsom-pamatsian-drano mafana tamin'ny iray santimetatra ho afaka. Ilay kit koa dia miaraka amina adaptatera valizy famatsiana roa handehanana 1/2 3/8 ka hatramin'ny 3/8 ″ raha tsy izany dia tsy hatsangana ny valves famatsian-tsofina mba hifandray amin'ireo fantsom-pamokarana 200/XNUMX ″ vaovao. Ny torolàlana momba ny fametrahana dia tsotra be hanarahana tsikelikely. Ny iray amin'ireo dingana ireo dia ny famoahana ny fantson-tsolika ho any amin'ny lohan-tsifitra faucet alohan'ny hampifandraisana ilay fitambarana fampifandraisana haingana. Nodinihiko ity dingana ity satria efa natsipiko tao anaty siny ilay rano mafana sy mangatsiaka misy mba hanala ireo fako alohan'ny hanombohana ny fametrahana ilay faucet vaovao. Miasa mahagaga ity faucet ity ary tena sarobidy ho an'ny fantsona faran'izay tsara. Nandoa vola $ XNUMX tany amin'ny toerana fitahirizan-trano aho ho an'ny faucet izay nitaha tamin'ity iray ity saingy sarotra kokoa ny mametraka azy, ny asa tanana tsy dia misy kalitao ary tonga miaraka amin'ny fantsom-pamokarana fohy kokoa. Mila mampifandray fantsona roa aho hahatratra ny valizy famatsian-drano mafana tena ambany avy eo izay niaraka tamin'ny faucet depot trano. Tena faly tamin'ny fividianako aho ary mikasa ny hanafatra faucet iray hafa atsy ho atsy ho an'ny hofan-trano hafa.
Tena tsara tarehy i Faucet ary mandeha tsara. Tsara ny torolàlana ary tsotra ny fametrahana.
Zavatra vitsivitsy hitako:
* Plout ny spout raha plastika raha metaly kosa ny faucet sisa. Toa fenitra tsara ho an'ny faucet ity ary mety omena amin'izao vidiny izao. Ny vy mivoaka dia tsy vy ihany koa. Manantena aho fa ireo fizarana ireo dia miatrika ny fitsapana ny fotoana sy ny fampiasana.
* Misy switch rocker izay mifehy ny spray vs. stream. Toa mijanona amin'ny toerana farany ilaozanao izany. (Ny ankamaroan'ny faucet efa hitako dia mitaky ny fisian'ny rano hitazomana ny fantsom-panafody). Ny bokotra "fiatoana" dia endri-javatra tsara ho an'ny fiasan'ny tanana tokana raha mitazona lovia na vilany amin'ny tanana iray hafa. Mahery ny spray.
* Misy lanjany hitazomana ny fantsom-panafody misintona amin'ny toerany. Tsy azo ampiasaina izany amiko satria manana tsipika sy fantsona ary valves mihidy be eny an-dàlana aho. Tsy afaka mamoaka ny spout mihoatra ny 10 santimetatra aho raha tsy misy ny lanjany manohitra zavatra. Raha feno hipoka ny faritra ambaninao, dia zavatra tokony hodinihina izany. Soa ihany fa nisy loharano nahafahako nampiasaina teto ity faucet nataoko ity.
* Misy visy miloko volafotsy kely mampihenjana ny gooseneck (manasarotra na mora mihodina). Nasongadiko izany satria raha apetrakao miatrika ny ankavia ny vatan-kazo dia eo aloha sy eo afovoany ny visy. Raha apetrakao afovoany miatrika ny tahony dia eo ankavanana ny visy. Raha apetrakao amin'ny ankavanana ny tahony, dia ao aoriany ny visy. Ny endrika dia toa mieritreritra fa hametraka amin'ny tanany ankavanana ianao satria ny marika dia miatrika anao amin'ity tranga ity. Ny fametrahana ahy tany am-boalohany dia ny hametahana ny tahony amin'ny ankavia fa tsy afaka niatrika ny fahitana ilay visy aho, ka nivadika ho eo afovoany ny tahony. Heveriko fa ny manana visy mifanohitra amin'ny tanany dia mety ho hevitra tsara kokoa mba hahafahan'ny mpandahatra ny fikirakirana rehetra tsy misy visy eo alohany (na ataovy mainty ny visy). Mety tsy miraharaha ny olona sasany fa miraikitra amiko.
* Ny fonosana dia misy lovia ho an'ny loaka 3 fa lavaka 1 ihany no tena ampiasaina. Misy koa ny adaptatera ho an'ny mpampitohy 3/8 ka hatramin'ny 1/2 inch.
Amin'ny ankapobeny, tsy ny fanciest na ambony amin'ny faucet tsipika eny, fa mieritreritra aho fa mahazo sanda tsara amin'ny vidiny ianao.
H *** f2020-09-04
Rehefa avy nilatsaka lohany nilentika somary lafo aho nandritra ny herinandro vitsivitsy noho ny tombo-kasenany dia nividy an'ity aho tamin'ny filentehany, tsy nanantena firy aho. Gaga aho fa matanjaka tsara ny fananganana, tsara ny fitaovana, ary niaraka tamin'ny ZAVATRA nilaiko hametrahana azy io; tonga niaraka tamin'ireo adaptatera fantsona vonona handeha aza izy io. Milentika matevina amin'izay hitako hatreto, hanavao raha misy tsy mety.
Zavatra tsy tadidy rehefa mividy:
-Tsy misy dispenser savony, ka raha te hampifangaro azy ianao dia mila mahita ny mpivady
-Nividy an'io amidy mora vidy tokoa aho, noho izany ny fiakarana amin'ity sink ity dia miankina amin'ny vidin'ny kalitao tanteraka
-Mety tsara ho an'ny loha sy ny tantana, ka alaivo antoka fa tsy ho akaiky loatra amin'ny rindrina aoriana izy io (Atleast 1 1/2 inch)
Efa ela aho no naniry fantsom-panafody toy izao nefa tsy nanana vola ampy hividianana azy. Ny "WOWOW Faucet" dia vita tsara amin'ny kalitao sy ny vola. Azafady mba manangona tahiry ho an'ny olona toa ahy izay amin'ny teti-bola ary izao dia manana faucet tsara kalitao tena tsara ampiasaina mandritra ny fotoana lava be aho. Misaotra anao ary tohizo ny asa tsara rehetra. Misaotra!
Vaovao aho amin'ny fanoloana faucet lakozia DIY. Tsy maintsy nosoloiko faucet Pfister 526 Contempra taloha izay nanomboka nibontsina avy hatrany tao ambadiky ny lohany ny fantsom-bokony. Tsy azoko natao ny nanapa-kevitra ny hanamboatra azy sa hanolo azy. Nametraka olana hafa indray aho teo aloha. Fa inona no ratsy namboarina, mihoatra ny injeniera, ary noho izany dia lafo ny vokatra. Ny fanitsiana dia toa tsy safidy mety. Na ny ampahany aza dia lafo. Manolo ny iray ianao, ny iray hafa hilavo lefona aminao (izany no mihoatra ny injeniera sy ny endrika ratsy). Misaotra an'Andriamanitra fa nanary azy aho. Noho ny fandresen-dahatra sy fankaherezana avy amin'ny namana sy fianakaviana, ary fifanarahana varatra tonga tamin'ny fotoana nilana azy tamin'ny WOWOW, dia notifiriko ilay WOWOW. Tsy mety diso mihitsy amin'ny faucet vaovao iray izay mitovy vidiny amin'ny Pfister fotsiny izay manongana hoso irery. Ny tsotra, misy famolavolana saina, ary ny fananana ny kojakoja rehetra tafiditra ao anaty fonosana dia nahatonga azy io ho finaritra kokoa hametraka. Nanome ahy fahatokisan-tena vaovao io rehefa nahavita ilay asa. Tena mendrika izany. Avelao aho hanontany, inona koa no ilain'ny olona amin'ny paompy ao an-dakozia mihitsy, nefa izy rehetra saika mitovy fitarainana.
B *** S2020-09-22
Nividy ity faucet an-dakozia ity aho rehefa avy nandinika fikarohana modely isan-karazany. Tiako ny manana bokotra mazava tsara mampiseho mafana sy mangatsiaka. Ny faucet hafa notsoahiko dia tsy nanana an'ity fampisehoana ity. Nanana plumbery nametraka azy aho ary nilaza izy fa ny tena sarotra indrindra dia ny manala ilay faucet taloha. Ny fametrahana an'ity iray ity dia mora araka ny nambarany.
Ny faucet dia misy fikorianana tsara miaraka amin'ny fikorianan'ny rano mahitsy sy malalaka. Malalaka be ny tahony raha ampiasaina. Tiako ny azo esorina ny tampon'ny faucet ka hahatratrarana ireo toerana sarotra ao anaty tebiteby ireo. Nanana fantsom-pianarana taloha izahay ka izany dia perk tsara ho antsika izao. Amin'ny ankapobeny, mividy IMHO tena tsara. Nividy izany tamin'ny nikela borosy izahay ary mora be ny mitazona ny fahadiovantsika vs ny iray chrome izay nosoloiny.
*** G E2020-09-23
Amin'ny lafiny tiana dia tianay ny fomba, ny arc avo lenta ary ny fikororohana mora foana amin'ny lafiny iray. Mikoriana tsara sy mihosotra tsara. Raha ny momba ny tsy tiako, ny hany fitarainako dia ny kofehy tsy dia misy kalitao amin'ny voanjo izay miraikitra amin'ny faucet mankany anaty rano. Ny voanjo dia hanodina revolisiona 3/4 mora foana ary ny 1/4 VERY mafy be. Toy izany hatrany hatrany amin'ny sink, izay 1/2 ″ fotsiny ny hateviny. Tsy mahafinaritra ho an'ny lehilahy antitra iray mandry ao an-damosiny. Ilay takelaka escutcheon dia zara raha nanarona ireo lavaka telo tao anaty rano. Ny santimetatra lava kokoa dia tokony ho plus. Ny tombo-kase eo anelanelan'ny faucet sy ny lovia escutcheon dia (singa 2) dia antsoina hoe "gasket". Tena peratra O izy io. Gasket dia fisaka. Ny ankamaroan'ny olona dia hahafantatra peratra O rehefa mahita iray izy. Ataovy tsy dia mampisavoritaka azy io satria misy gasket rubber (fisaka) mandeha eo ambanin'ilay fantsakana ambonin'ilay lovia vy. Haingana sy mora ny fifandraisana amin'ny famatsian-drano. Tsy misy fivoahana tokana.
Azoko! tsy hanenenanao izany !!!!! Mora apetraka ary izay voalaza ao amin'ilay famaritana, 20 minitra hampiarahana azy, YUP !!!! 20 minitra no nilako azy ara-bakiteny. Avo ny faucet, noho izany dia hanoro hevitra ny mpividy ny handrefy ny faritra b4 mividy azy aho. Tiako fa mora vidy ilay faucet ary toa lafo. Misaotra WOWOW nametraka faucet ho an'ny vidiny mirary !!!!! Raha ny ankehitriny dia tsy afaka milaza zavatra ratsy aho ka manome soso-kevitra ity faucet ity ka mandehana!
*** G E2020-09-29
Skeptika tanteraka aho ka niantsena betsaka ary nanandrana ny tsara indrindra mba tsy ho may. Nanapa-kevitra tamin'ity faucet ity aho, na dia nilaza aza ny ampahany sasany tamiko hoe "mandoa vola fanampiny mba hahazoana kalitao TENA". Zava-dehibe amiko ny faharetana - amin'ny lafiny iray. Hatreto dia tsapako fa natolotra tanteraka ity vokatra ity, ary nihoatra lavitra ny antenaiko. Rivotra hametrahana (na dia tsy laharam-pahamehana aza), fa ny tsara indrindra dia miasa tanteraka: hery feno rehefa tianao izany, kely kokoa raha tsy tianao, tiavo ny tsifotra fa mora mifamadika eo anelanelan'ny spray sy stream. Ny vadiko dia tsy azony antoka fa tiany ilay bika, fa izao dia tena tiany ilay izy. Amin'ny ankapobeny dia fandresena tanteraka (hatreto). Hanavao raha misy miova amin'ny fampiasana (faharetana), fa 2 herinandro ary tiako foana izany.
Hatramin'ny fotoana hanokafanao ny fonosana, ity faucet ity dia toa avo lenta. Mora ny mametraka sy miasa tsara tarehy. Nesoriko ilay faucet taloha izay nisy fantsom-pivoahana na dia tsy dia antitra aza izany. Ny kalitaon'ny wowow dia ambony lavitra. Mba hahatonga ity faucet ity hiasa ao amin'ny fantsom-panafody misy lavaka 3 dia nila escutcheon 6 (aho (fa tsy ilay lehibe kokoa izay ampidirin'izy ireo hametrahana lakozia). Nahita ilay nesorina BWE 6 ″ tamina nikela borosy aho (maro ny olona novidiako no tsy nibolisatra tamin'ny WOWOW na dia nilaza aza ireo escotcheon hafa fa 1 3/8 ″ ny savaivony. Nampiasa tsiranoka tamin'ny fandavahana aho mba hahatonga ny lavaka afovoany ho ampy handraisana ilay WOWOW. Faly be amin'ireo entana roa ireo.
S *** ny2020-10-08
Eo am-panamboarana ny lakozianay izahay ary maniry fantsom-baovao satria efa nivoaka ny anay. Rehefa avy nandinika maodely maromaro izahay dia nanapa-kevitra momba an'io.
Tonga lafatra ny vidiny (manofa izahay ka tsy te handany vola be) nesorina ny valaninay rehefa namboarinay ny tampon-kaoninay ka somary sarotra ny nametraka azy toa izany saingy napetrako teo am-piasan'ny vadiko .
Tsy misy fivoahanay, ny spray spray dia ny tiako indrindra lol. Toa ny lafo ihany izany any amin'ireo magazay lehibe, nanome ny lakozantsika endrika maoderina sy kanto toy izany aho, ary tiako tokoa ny mandany fotoana ao an-dakozia lol. Tena hanome soso-kevitra !!
Ity no fiakarana avo fahefatra, sintomy ny faucet ao an-dakozia napetrako.
Ity no tsara indrindra.
Manana fifandraisana lava kokoa izy io. Ary metaly mampifandray haingana ny voanjo.
Lava kokoa ny fantsom-pivoahana, miaraka amina kofehy vy. Plus misy bokotra fiatoana tsy ananan'ny hafa izy io. Izy io koa dia manana taha ambony be.
WOWOW Varotra an-dakozia an-dakozia mameno paosy sandry C ...